ဈေးကြီးအမြန်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလှုပ်ရှားမှု ( signature campaign)
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင် လာရောက်လက်မှတ်ထိုး ဆန္ဒပြုသူများကို တောင်ငူမြို့ရဲ့
- ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှု့မှာ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၊ မည်သည့်ကော်မတီမှ
ပါဝင်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ မြို့သူမြို့သားများနှင့် နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့သူ
ဈေးသူဈေးသားများမှ စုပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်လိုပါသည်။
-လက်မှတ်ထိုးလှုပ်ရှားမှု့ကို ၂၄ရက်နဲ့ ၂၅ရက်နေများတွင် ၂ရက်ဆက် ၆လမ်း ရွှေနဂါးစတိုး
မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် မနက် ၈နာရီမှ ညနေ၃နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး
၂၅ရက်နေ့တွင် တောင်ငူမြိုသို့လာရောက်မည့် နိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတခရီး စဉ်
-ယနေ့ညနေအချိန်အထိ လက်မှတ်(၅၀၀)ကျော် ရရှိနေပြီး ကျန်ရှိနေသူများအနေဖြင့်
-ကိုညီညီနိုင် ( ဈေးသူဈေးသား)
-ကိုနှင်းမောင် ( မြို့ခံ)
credit:Kyaw Swar Linn is with Thu Ra and7others.
Posted by Phoe Twenty at 11:54 AM No comments:
လူ့ မှုဆက်ဆံရေး ရာဇ၀င်သမိုင်းမှာ
ဒါလား မင်းရဲ့ ဘ၀ရပ်တည်မှု ?
စာအုပ်မျက်နှာ ရေ ...
ဖိုးတွမ်တီး နိုးအောင်စိုင် Myanmar
Posted by Phoe Twenty at 11:08 PM No comments:
Posted by Phoe Twenty at 1:02 AM No comments:
မြန်မာရိုးရာ သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ 
Posted by Phoe Twenty at 4:49 AM No comments:
Posted by Phoe Twenty at 5:43 AM No comments:
Posted by Phoe Twenty at 5:37 AM No comments:
ရှေးဘ၀က ဘုရားမှာ ကြေးစည်လှူခဲ့လို့ လားမသိဘူး
ကောင်းလိုက်တဲ့ သဒ္ဒဆိုတဲ့အသံ။ ထားပါတော့ အသံကောင်းတယ်လို့ 
အသည်းနှလုံးကို အဆိုပညာ မှော်အစွမ်းနဲ့ ဆွဲယူချေမွလိုက်သလို
Posted by Phoe Twenty at 5:51 AM No comments:
Blog Archive August (1) June (1) April (8) March (1) October (1) September (1) June (3) May (1)